भिसा सकिएपछि पर्यटक अलपत्र,भिसा अवधि बढाइदिन माग! - ParyatanBazar.com
भिसा सकिएपछि पर्यटक अलपत्र,भिसा अवधि बढाइदिन माग!
साउन ८ ,काठमाडौँ।आफ्नो अवकाश जीवनपछि पर्यटक भिसामा नेपाल आएका अस्ट्रेलियाका ६९ वर्षीय फ्रेङ्क अर्मिडा आफ्नो अवधि सकिएपछि चिन्तित छन् । लकडाउन र कोरोना कहरले सोचेजस्तो नेपाल घुम्न नपाउँदै नेपाल बस्ने अवधि सकिएको तथा आफ्नो देशमा पनि अहिले प्रवेश नपाउने चिन्ता छ उनलाई । ‘पर्यटक भिसाको अवधि सकियो ।
नेपाल सरकारले अवधि सकिएकालाई एक हप्ताभित्र देश छोड्नु भनेको छ । नेपालमा नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भएपछि अस्टे«ेलियाले रेडजोनमा राखेको छ र स्वदेश भित्रिन दिँदैन । यस्तो वेला कसरी घर फर्कनु ?’ उनले भने ।